Munaasabad Lagu Xusayay Maalinta Warbaahinta Soomaaliyeed oo Lagu Qabtay Nairobi “SAWIRRO” – Radio Muqdisho
Munaasabad Lagu Xusayay Maalinta Warbaahinta Soomaaliyeed oo Lagu Qabtay Nairobi “SAWIRRO”
Munaasabad balaaran oo uu soo qaban qaabiyay ururka saxafiyiinta qurba joogta Soomaaliyeed ee dalka Kenya (SEJASS) oo lagu xusayay maalinta warbaahinta Soomaaliyeed oo ku began 21-January ayaa maanta lagu qabtay magaalada Nairobi.
Munaasabaddan ayaa waxaa ka soo qeyb galay safiirka dowlada Soomaaliya u fadhiya dalka Kenya Ambassador Maxamed Cali Nuur Americo,Tom Rhodes oo ururka CPJ u qaabilsan qaarada afrika,Cali Muuse Cabdi oo ah wariye ruug cadaa ah kana tirsan wakaalada wararka ee AFP,Xasan Cali Geeseey oo ah agaasimaha SIMHA iyo wariyaal aad u fara badan.
Ugu horeyn xubno u hadlay gudiga qaban qaabada munaasabadda xuska maalinta warbaahinta Soomaaliyeed ayaa faahfaahin ka bixiyay muhiimada ay xuska maalintan u leedahay warbaahinta Soomaaliyeed,iyo in ay tahay in sanad kasta la xuso oo la maamuuso maalintan qaaliga ah.
Munaasabadda ayaa waxaa hadalo ku aadan qiimaha maalinta warbaahinta Soomaaliyeed ka jeediyay wariyaashii ka soo qeyb galay.
Cali Muuse Cabdi oo ka tirsan wakaalada wararka ee AFP oo hadal ka jeediyay munaasabadda ayaa u mahad celiyay uruka saxafiyiinta qurba-joogta Soomaaliyeed ee dalka Kenya,waxana ugu baaqay wariyaasha Soomaaliyeed in ay is caawiyaan meel kasta oo ay joogaan,isagoo sheegay in wariyaasha ay dowr muhiim ah kaga jiraan bulshada Soomaaliyeed.
Agaasimaha SIMHA Xasan Cali Geeseey ayaa isna munaasabadda ka sheegay in ay muhiim tahay in la diiwaan galiyo dhamaan wariyaasha soomaaliyeed ee ku sugan dalalka afrika,si loola socdo xaaladaha ay ku suganyihiin.
Gudoomiyaha ururka saxafiyiinta qurba-joogta ah ee dalka Kenya (SEJASS) Maxamed Cismaan Xuseen(New York) ayaa sheegay in ururuka SEJASS uu sanadihi ugu danbeeyay xusayay maalinta warbaahinta Soomaaliyeed,isagoo ka sheekeeyay marxaladihii kala duwanaa oo uu soo maray ururkan iyo hadafka uu hiigsanayo.
Gudoomiye New York ayaa sheegay ururka SEJASS uu balan qaad ka haysto hay’ado iyo ururo caalami ah,kuwaasoo bilaha soo socda tababaro kor loogu qaadayo xirfadda saxaafadeed ee wariyaasha qurba joogta ah.
Guddoomiyaha SEJASS ayaa intaasi ku daray in ay diiwaan galin ku sameyn doonaan wariyaasha qurba joogta ah,islamarkaana loo sameeyn doono kaarar aqoonsi ah.
Ugu dambeyntii safiirka dowlada Soomaaliyeed dalka Kenya Ambassador Maxamed Cali Nuur Americo oo soo gabagabeeyay munaasabadda lagu xusayay maalinta warbaahinta Soomaaliyeed ayaa sheegay in uu aad ugu faraxsanyahay in uu ka soo qeyb galo munaasabaddan.
Ambassador Cali Americo ayaa ugu baaqay hay’adaha iyo ururada caalamiga ah in ay caawiyaan wariyaasha qurba-jooga ah,isagoo intaasi ku daray in ay saafarada soomaaliyeed ee dalka Kenya ay gacan ka geeysan doonto sidii ay tababaro ku heli lahaayeen wariyaasha qurba joogta ah.
Ugu dambeyntii waxaa wariyaasha qurba joogta ah ee dalka Kenya ee SEJASS ayaa shahaado sharaf gududonsiyay Safiirka dowlada Soomaaliya u fadhiya dalka Kenya Ambassadore Maxamed Cali Nuur Americo iyo Tom Rohdes oo CPJ u qaabilsan Afrika.
Sawir qaade:-Cabdi Shakur Faarax Cigale
Liverpool iyo Chelsea oo Bareejo Ku Kala Baxay Lugtii Koowaad ee Koobka Capital One “SAWIRRO”